Ny iPhone 13 dia manana RAM mitovy amin'ny taranaka teo aloha | Vaovao IPhone
Apple tsy manome fampahalalana momba ny RAM an'ny fitaovany velively. Izany dia satria ny miasa rafitra izay entiny dia tsy mitaky fahatsiarovana be loatra mba hiasa tsara ary mamela azy ireo hametraka fahatsiarovana ambany kokoa amin'ny iPhone-ny. Fa rehefa hivarotra ny vokatra dia ratsy ny manana fahatsiarovana ambanin'ny fifaninanana, izay mahatonga an'i Apple hisoroka ny fitaterana an'ity angona ity amin'ny teny ifotony. Na izany aza, ny beta an'ny Xcode 13 dia nanambara ny RAM an'ny iPhone vaovao 13. Raha ny Pro dia 6 GB, ny iPhone 13 sy 13 mijanona kely amin'ny 4 GB. Ireo angona ireo dia mitovy amin'ny fahatsiarovana ny iPhone 12 natolotra tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa.
RAM 6 GB ho an'ny iPhone 13 Pro ary RAM 4 GB ho an'ny mini iPhone 13 sy 13
Ny lakilen'ny fahazoana izany fampahalalana izany dia ao amin'ny kaody miafina ao amin'ny Xcode 13 beta. Toy ny amin'ny tranga hafa, ireo beta ireo dia mamela antsika hiditra amin'ny fampahalalana mifandraika amin'ny fitaovana izay mbola tsy eo am-pelatanantsika. Efa nitranga tamin'ny taon-dasa tamin'ny iPhone 12 sy roa taona lasa izay niaraka tamin'ny iPhone 11 izay nahafahanay naka loharanom-baovao avy amin'ireo fampitaovana anatiny tamin'ny alàlan'ny Xcode betas izay nomen'i Apple ho an'ny mpamorona raha vantany vao vita ny keynote tamin'ny septambra.
Ny mpandraharaha dia naka izany fampahalalana izany ary azo natao ny nahafantatra ny RAM an'ny iPhone 13 vaovao. Ity fahatsiarovana ity dia ahafahan'ny iPhone mitahiry data vetivety amin'ny famafana ny fampahalalana rehetra rehefa natomboka na maty ny fitaovana. Ny habetsaky ny RAM dia mifandraika amin'ny fahombiazan'ny fitaovana, fa ny fiovan'ny rafitra miasa kosa dia miditra an-tsehatra, izay tsy maintsy afaka manatsara ny loharano. Ny rafitra miasa izay manatsara tsara ny loharanom-pahalalana dia tsy mila RAM be dia be hiasa tsara, toy ny tranga misy amin'ny iOS sy iPadOS.
Amin'ny tranga iPhone 13 dia hita izany zarao amin'ny iPhone 12 ity RAM ity. Ny mini iPhone 13 sy 13 dia mitondra memoara 4 GB, raha toa kosa ny maodely Pro sy Pro Max dia mitahiry fahatsiarovana 5 GB, toy ireo namany taloha ihany. Ity fampahalalana ity dia azo hamarinina rehefa voaray ao anatin'ny herinandro vitsivitsy ny singa voalohany. Na izany aza, ny loharano dia nitovy tamin'ny taranaka lasa rehetra ary amin'izy rehetra ireo dia nifanaraka tamin'ny zava-misy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny iPhone 13 dia manana fitadidiana RAM mitovy amin'ny taranaka teo aloha
Kitendry feno eo amin'ny efijery vaovao an'ny Apple Watch Series 7